How'd it happen and more reports?: အလုပ်သမားရှားပါးမှုကြောင့် ဂျပန်စီးပွားရေး ထိခိုက်
အလုပ်သမားရှားပါးမှုကြောင့် ဂျပန်စီးပွားရေး ထိခိုက်
ကမ္ဘာ့တတိယစီးပွားရေးအင်အား အကြီးဆုံး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်သ မားရှားပါးမှုက ဆောက်လုပ်ရေးမှဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအထိ အဓိကလုပ် ငန်းနယ်ပယ်အချို့တွင် အကျပ်အ တည်း ကြုံတွေ့ရလုနီးပါးဖြစ်နေပြီး လုပ်ခလစာများမြင့်တက်စေကာ ပြန် လည်ကောင်းမွန်ခါစ စီးပွားရေးအား ထိခိုက်လာနိုင်မည့်အရေးနှင့် ကြုံတွေ့ နေရသည်။
လေကြောင်းလိုင်းများ၊ ကုန်တိုက်လုပ်ငန်းများ၊ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ် ငန်းအများအပြားမှာ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင် ရန် အခက်တွေ့နေပြီး လုပ်ခလစာ မတတ်နိုင်သဖြင့် ပိတ်လိုက်ရသည့် ဆိုင်များလည်းရှိနေသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ ၏ အကြီးဆုံးလေကြောင်းလိုင်း ANA က ကျောထောက်ခံပြုထားသည့် ပိခ်ျ လေကြောင်းသည် ယခုနှစ်အတွင်း ခရီးစဉ် ၂၀၀၀ ကျော်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရ ပြီး စုစုပေါင်းစီစဉ်ထားမှု၏ ၁၆ ရာ ခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်။ စရိတ်နည်း လေ ကြောင်းများဖြစ်သည့် ဂျက်စတားနှင့် ဗန်နီလာလေကြောင်းလိုင်းများက လည်း ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် ခရီးစဉ် ရာနှင့်ချီ ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီး လေယာဉ် မှူးမလုံလောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ ပိခ်ျလေကြောင်းမှ ပြော ခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဆာကာဂါမီက“လေယာဉ် မှူးတွေ လုံလောက်မှုမရှိဘဲ အသစ် လေ့ကျင့်ဖို့လည်း အချိန်နဲ့ငွေလိုပါ တယ်”ဟုဆိုသည်။
ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကြာ ငွေကျုံ့မှု ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၀န် ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေး၏ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုများကြောင့် စီးပွားရေးပြန်လည် ကောင်းမွန်လာသော်လည်း ဂျပန်ကုမ္ပ ဏီအများအပြားမှာ အလုပ်သမားရှား ပါးမှုနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်။ နိုင်ငံခြား မှ ၀င်ရောက်လာသူနည်းပါးခြင်း၊ အ လုပ်သမားငှားရမ်းခြင်းဥပဒေများမှာ တင်းကျပ်ခြင်းနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်ကြ သည့် အသက်အရွယ်ရှိလူဦးရေ ကျ ဆင်းခြင်းတို့က အလုပ်သမားရှားပါး စေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများ ဖြစ်ပြီး ၂၀၃၀ တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏အ လုပ်လုပ်နိုင်သည့် အသက်အရွယ်ရှိ လူဦးရေ ၁၃ သန်းလျော့ကျသွား မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ပြဿနာ ကြုံတွေ့နေရသည့် ကုမ္ပဏီများက စီး ပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန် ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များအား သံသယ ၀င်လျက်ရှိသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးဂျပန်နိုင်ငံတွင် လုပ်သား အင်အားရှားပါးခြင်းကြောင့် ယခင်က မကြုံဖူးသည့် အခြေအနေနှင့်ကြုံနေ ရသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လူဦးရေကျ ဆင်းလာနေသော်လည်း နိုင်ငံခြားမှ ၀င်ရောက်လာသူများနှင့် အလုပ်သ မားဥပဒေများအား ဖြေလျှော့ခွင့်ပြု ပေးရန် ငြင်းဆိုလျက်ရှိသည်။ ၂၀၅၀ တွင် နိုင်ငံခြားမှဝင်ရောက်လာသူ ၂၀၀,၀၀၀ ထိခွင့်ပြုရန် ၀န်ကြီးချုပ် အကြံပေးများ၏တင်ပြချက်မှာ မကြာ မီက ပယ်ချခံရသည်။ ၀န်ကြီးချုပ်က နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားသင်တန်းသား အစီအစဉ်အား တိုးချဲ့ရန်စီစဉ်ခဲ့သော် လည်း သင်တန်းသားများမှာ သက် ကြီးရွယ်အိုများ လုပ်ငန်းခွင်ပိုမိုဝင် ရောက်ရန် ၀န်ကြီးချုပ်က အားပေး လျက်ရှိသော်လည်း လိုအပ်ချက် မ ပြည့်မီနိုင်ဟုဆိုသည်။
အစိုးရ၏ မေလစာရင်းဖယား များအရ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်ရှာ ဖွေသူ ၁၀၀ ဦးအတွက် ကမ်းလှမ်း သည့်အလုပ် ၁၀၉ ခုရှိနေပြီး ၁၈ ကြိမ် ဆက်တိုက် မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ် သည်။ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ၀န်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းများ၏ အလုပ်ခေါ်စာများ လည်း မြင့်တက်လာလျက်ရှိပြီး အ များစုမှာ လုပ်ခနည်းအလုပ်များဖြစ် သည်။ ဇန်ရှီကုမ္ပဏီသည် လုပ်သား အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့် အ ရောင်းဆိုင် ၂၀၀ ခန့်ပိတ်ခဲ့ရသည့် အတွက် ပြီးခဲ့သည့်လက ရှယ်ယာ ရှင်များအား တောင်းပန်ခဲ့ရသည်။ ၀ါတာမီကုမ္ပဏီကလည်း အချိန်ပိုင်း လုပ်သားများ လုံလောက်စွာမရသဖြင့် အမြတ်နည်းသည့် အရောင်းဆိုင် ၆၀ ခန့်ပိတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ဆူနာမီနောက်ပိုင်း ပြန် လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ၂၀၂၀ တိုကျိုအိုလံပစ်အတွက် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်သားလိုအပ်ချက်တိုးမြင့်လာလျက် ရှိသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်တွင် စတီးဖရိန်တပ်ဆင်သည့်ကျွမ်း ကျင် လုပ်သားနေရာအတွက် အလုပ် ခေါ်ယူမှု ၈ ဆ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး အခြား လုပ်သားခေါ်ယူမှုလည်း မြင့်တက် လာနေသည။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ် ငန်းခွင်လုပ်သားများ ရှားပါးမှုကြောင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ ကုန် ကျစရိတ်မှာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၀ ရာ ခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာသည်။ ဂျပန် နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းအရောင်းဆိုင်လုပ် ငန်းများဖြစ်သည့် ယောက်ဘန်နီမာရု နှင့် ရှီမာမူရာတို့သည် ဆောက်လုပ် ရေးကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုကြောင့် ဆိုင်သစ်များအား စီစဉ်ထားသည့်အ တိုင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း တွင်လည်း လုပ်သားရှားပါးမှုပြဿနာ အား ကြုံတွေ့နေရသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ ၏ စက်မှုဒေသနာဂိုယာတွင် ထရပ် ကား ၄၀၀ ခန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်နေသည့် ထိုင်ဟိုပုိ့ဆောင်ရေး သည် ယာဉ်မောင်းမလုံလောက်မှုများ ကြောင့် ထရပ်ကား ၁၀ ပုံ ၁ ပုံခန့် ရပ်နားထားရသည်။ ဂျပန်ပို့ဆောင် ရေးဝန်ကြီးဌာနအဆိုအရ ပို့ဆောင် ရေးကုမ္ပဏီများ၏ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ လုပ်သားမလုံလောက်မှုနှင့် ကြုံတွေ့ နေရသည်ဟုဆိုသည်။ အချို့ကုမ္ပဏီ များမှာ လုပ်သားရှားပါးမှုပြဿနာ အား ပိုမိုဆိုးဝါးစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး လုပ် ခလစာစရိတ်ကြီးမြင့်မှုကြောင့် ၆ လ အတွင်း ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုရပ်နားသွား ရသည်ဟုဆိုသည်။
KHTun အတွဲ ၂ အမှတ်စဉ် ၂၂၊ သည်လေဒီးစ် နယူးစ်ဂျာနယ်။
Posted by Ko Nge at Sunday, August 31, 2014
အလွန်ရှားပါးသည့် အနီရင့်ရောင် စိန်ပွင့် ၄ ပွင့်ကို...
အွန်လိုင်းပေါ်က အခမဲ့သင်တန်းကျောင်း Khan Academyေ...
ထူးကဲသောအရသာဖြစ်စေသည့်ဟင်းလျာ၏ လျို့ ၀ှက်ချက်
ရွှေမမလေး နိုင်ငံတကာ နိုးကြားတဲ့အသိပညာတွေနှင့်အသိ...
ကားကလေးနှင့် မူးယစ်ဆေးသယ်၊ တစ်ထိုင်တည်းချ၊ တစ်ခါတည...
မြန်မာ့ အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက် နောက် မှာ ဂျော့ဆော့ရော...
လက်သင့်ရာပေး၍ အိမ်ရာစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ခြ...
ဂျပန်က ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး သတင်းကြေညာသူ စက်ရုပ်ကို မိတ်ဆက...
မိန်းကလေးများ မုဒိန်းကျင့်ခံရနိုင်တဲ့ဆေးကို လက်သည်...
ငွေဖြူမရှိသူကို ၀င်ငွေခွန်ဖြင့် အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ယူခွင...
တရုတ်ငွေဘီလီယံ ၂၀၀ ခန့် တရားမ၀င်နှစ်စဉ် စီးဝင်မှုမ...
စကာင်္ပူစတော့ကို ဘယ်လိုစပြီး ၀င်ကစားမလဲ?
အမိမြေကနေ၀င်ကစာလို့ရတဲ့ အွန်လိုင်းစတော့လေးတခု o...
STProperty Seminar 2012 - "Investing in Myanmar: H...
အလွန်အမြတ်အစွန်းများတဲ့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများမှာဘဲ ...
Air Con oယ်မယ်ဆို သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
မြေယာများကိုဈေးကစားခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်း မြေဈေးနှု...
"မြေအမျိုးအစားအကျယ်ဖွင့် နှင့် တန်ဖိုးနည်း မြေကွက်...
Colgate Total သွားတိုက်ဆေးတွင် ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သေ...
A Day in the Life of Changi Airport !
The air traffic in Singapore's Changi Airport!
Proverbs ( စကားပုံများ)
အီဘိုလာ ရောဂါပိုးကို သတ်နိုင်မည့် ဆေးတွေ့ ပြီ
စကာင်္ပူမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခန်းတွဲလေးတွေ ရှာကြည့်...
ဟံသာဝတီ လေယာဉ်ကွင်း စီမံကိန်းကြောင့် ပဲခူးမြို့ပြင...
၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုနှစ် စည်းကြပ်နှစ်အတွက် တိုက်ခန်းများေ...
Blu-ray disc ထက် အချက်အလက်သိုလှောင်နိုင်မှု အဆပေါင...
A Japanese Business man slappedafemale hotel sta...
Myanmar Real Estate: How to identify bankable pro...
သန်းခေါင်စာရင်းအပြီး သိလိုက်ရတဲ့ မြန်မာပြည့်တန်ဆာေ...
Doing business in Myanmar - What you need to know...
သွင်းကုန်လိုင်စင် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် ပစ္စည်းများ
ပို့ကုန်သွင်းကုန်သတင်း ၁ -၂၀၁၄
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု လာလာ မလာလာ ရန်ကုန်မြ...
"အခမဲ့ အွန်လိုင်းပညာသင်ကြားရေး Web link များ "
Khan Academy ခန်းအကယ်ဒမီ မြန်မာဘာသာပြန်
Contraceptive chip ကိုယ်ဝန်တား ‘ချစ်ပ်”
ဈေးတက်ပြန်ပြီ မဟာရန်ကုန်အနီး ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်...
သြော်..မိန်းမ...မိန်မ ဆိုတာ ဘာလဲဗျ.....
မြန်မာအိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အခြေအနေ H2 2103 by Scipio...